HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
MAHAGAGA ihany ny olona sasany. Mbola te hividy an’izao rehetra izao ihany izy nefa ny vola efa tsisy, ny asa tsy azo antoka, ary ny trano aza mety hafoy.
Ny olona hoatr’izany no tena mora sodokan’ny dokam-barotra. Ampirisihana erỳ ny mpividy hoe: ‘Mila manana akanjo lamaody sy fiara tsara tarehy ary entana vaovao ianao!’ Ary raha tsy manam-bola? Tsy olana fa mitrosa fotsiny e! Dia betsaka tokoa no roboka. Mba te hiseho ho mpanankarena mantsy na dia efa bokan’ny trosa aza.
Tsy maintsy hisy farany anefa izany, na ho ela na ho haingana. Hoy ilay boky hoe Mihanaka toy ny Aretina ny Fitiavan-tena (anglisy): ‘Raha mitrosa noho ny rendrarendra fotsiny ianao satria hoe mba te hiseho ho manan-katao, dia toy ny mifoka rongony. Amin’ny voalohany ihany ianao no hoatran’ny sambatsambatra, fa avy eo kivy sady tsy hanana na dia tapa-panjaitra aza.’
Milaza ny Baiboly fa hadalana ny “fampideraderana fananana.” (1 Jaona 2:16) Raha variana loatra mitady vola ianao, dia ho hadinonao ny zavatra tena lehibe eo amin’ny fiainana izay tsy voavidin’ny vola. Ireto misy telo amin’izany:
1. FIANAKAVIANA MIFANKATIA
Malahelo i Brianne, * ankizivavy iray any Etazonia, satria miasa foana ny dadany sady tsy mieritreritra afa-tsy ny mitady vola. Hoy izy: “Efa anananay daholo izay ilainay rehetra ary mihoatra noho izany aza. Dadanay anefa tsy eo foana satria mandeha lava. Ekeko hoe miasa izy, fa na izany aza tokony mba jereny ihany ny fianakaviany!”
Eritrereto izao: Nahoana ny dadan’i Brianne no mety hanenina any aoriana any? Lasa nanao ahoana ny fifandraisan’izy mianaka, noho izy variana loatra miasa? Inona no ilain’ny fianakaviany kokoa noho ny vola?
Toro lalan’ny Baiboly:
“Aleo mihinana anana ao anatin’ny fifankatiavana, toy izay mihinana omby mifahy ao anatin’ny fifankahalana.”—Ohabolana 15:17.
Tadidio àry hoe: Tsy ny vola mihitsy no mahasambatra ny fianakaviana. Mila miaraka matetika amin’ny fianakavianao kosa ianao. Fitiavana sy tambitamby mantsy no ilain’izy ireo. Izany ihany no mahasambatra.—Kolosianina 3:18-21.
Hoy i Sarah, 17 taona: “Averimberin’ny mamanay amiko foana hoe manambadia olona manan-karena. Dia asainy mianatra asa koa aho amin’izay mba mahavita tena, hono. Tsy misy afa-tsy ny hoe aiza indray no ahitana vola ny ao an-tsain’ny mamanay.”
Eritrereto izao: Inona avy no mety hampanahy anao momba ny hoavinao? Ara-dalàna aloha ny manahy, nefa rahoviana izany no mety ho tafahoatra? Ahoana no ahitana fa manahy loatra amin’ny resa-bola ny maman’i Sarah? Inona anefa no tokony hataony raha mahay mandanjalanja izy?
“Aza manangona harena ho anareo intsony etỳ an-tany, izay misy bibikely sy harafesina manimba, ary misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra.”—Matio 6:19.
‘Tsy fantatrareo izay hitranga aminareo rahampitso.’—Jakoba 4:14.
Tadidio àry hoe: Na hanangona vola be eran’ny trano aza ny olona, dia tsy miankina amin’izany ny hoaviny. Mety hisy handroba mantsy izany. Na ny olona manam-bola be koa aza mety harary mafy ary mbola ho faty ihany. Tsy mahasakana an’izany mihitsy ny vola! (Mpitoriteny 7:12) Milaza ny Baiboly fa mila mianatra momba an’Andriamanitra sy ny fikasany isika, vao ho azo antoka ny hoavintsika.—Jaona 17:3.
3. FIFALIANA AMIN’NY FIAINANA
Hoy i Tinasoa, 24 taona: “Nampianarin’ny dadanay sy mamanay hanana fiainana tsotra aho. Faly foana izaho sy ilay kambana amiko, na dia tsy nanana afa-tsy izay tena nilainay aza.”
Eritrereto izao: Nahoana no sarotra ny mianina amin’izay tena ilaina? Ianao ve modely tsara ho an’ny fianakavianao amin’izany?
“Raha manan-kanina sy fitafiana ary fialofana isika, dia aoka hianina amin’izany.”—1 Timoty 6:8.
Tadidio àry hoe: Tsy ny vola sy ny fananana no tena zava-dehibe amin’ny fiainana. Hoy mantsy ny Lioka 12:15: “Na manam-be aza ny olona, dia tsy miankina amin’ny zavatra ananany ny ainy.” Tsy ho afa-po amin’ny fiainana mihitsy isika, raha tsy mahafantatra ny valin’ny fanontaniana lehibe toy ireto:
Inona ny antony namoronana antsika?
Ahoana no hifandraisako amin’Andriamanitra?
Ho faly izahay Vavolombelon’i Jehovah hanampy anao hahita ny valin’ireo fanontaniana ireo. Miresaha àry amin’izay Vavolombelona hitanao, na jereo ny www.jw.org/mg.
^ feh. 8 Novana ny anarana amin’ity lahatsoratra ity.
Hoy ilay boky hoe Mihanaka toy ny Aretina ny Fitiavan-tena: “Misy olona tsy misaina afa-tsy vola. Izy ireny no tena mora kivy sy tsy faly amin’ny fiainana, amin’ny ankapobeny. Na dia ny olona vao mitsiriritra te hanan-karena koa aza anefa, dia matetika no mikorontan-tsaina. Maro no lasa farofy ka marary andoha, marary tenda, na marary lamosina. Betsaka aza no mivarilavo amin’ny toaka sy rongony. Hoatran’ny vao mainka fadiranovana ny olona, arakaraka ny imatimatesany amin’ny vola.”
Niova ny Toe-tsain’ny Mpianatra
‘Nanontaniana ny mpianatra teny amin’ny oniversite, tamin’ny 1960 sy 1970 tany ho any, hoe nahoana izy no manao fianarana ambony. Namaly ny ankamaroany hoe satria “mba te ho manam-pahaizana” na “mba te hanana hevitra ijoroana eo amin’ny fiainana.” Vitsy kely no nilaza hoe “mba te ho be vola rehefa miasa.” Niova anefa ny toe-tsain’ny mpianatry ny oniversite, taorian’ny 1990. Lasa ny hahazo vola be mantsy no tanjon’izy ireo eo amin’ny fiainana. Vokatr’izany anefa, dia lasa be dia be ny mpianatra kivy sy mikorontan-tsaina ary mamono tena mihitsy.’—Tambin’ny Fahombiazana (anglisy), nosoratan’ny Dr. Madeline Levine.
Hoy ny Dr. Madeline Levine, ao amin’ilay boky hoe Tambin’ny Fahombiazana: ‘Lasa “fanalana sorisory” ny miantsena. Rehefa diso fanantenana amin’ny fianakaviana na ny fiaraha-monina na ny fivavahana mantsy ny olona, dia izay sisa no ampiononany ny tenany. Hoatran’ny hoe mba afaka mibaiko ny manodidina anao koa ianao rehefa miantsena, satria ianao no mifidy izay mety aminao sy manao izay tianao. Diso hevitra ihany anefa isika amin’izany. Ireo orinasa lehibe sy mpanao dokam-barotra mantsy no tena mibaiko ny mpividy, raha ny marina. Ataony izay handresena lahatra anao hoe hiova tampoka ny fiainanao raha mividy ny entany ianao.’
Hizara Hizara Zavatra Telo Tsy Voavidy Vola